Ogaden News Agency (ONA) – Ree-Galbeedka ayaa maalgaliya xasuuqa ka socda Ogadenya
Ree-Galbeedka ayaa maalgaliya xasuuqa ka socda Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ July 12, 2011
Idaacad ka baxda dalka Mareykanka oo lagu magacaabo KPFA ayaa lagaga hadlay xasuuqa ka socda Ogadenya 4tii July oo ah maalintauu dalka Mareykanka xoriyadda qaatay.
Waxaa barnaamijka lagu falanqeeyay ciidamada la sheegay inay Itobiya u direyso gobolka Abyei ee dalka Sudan iyadoo la fulinayo go’aan ka soo baxay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay si looga badbaadiyo shacabka Abyei dagaal gaysta xasuuq.
Wuxuu barnaamijyka ka waramay in dawladda Mareykanka ay ciidanka Itobiya u dirtay halkaa, si loo hirgaliyo go’aankaa ka soo baxay QM, hasa ahaatee ay saxafiyiinta Afrika cadeeyeen in sababta cidaamada Itobiya loogu diray meesha ay tahay say u ilaaliyaan danaha Mareykanka ee shidaalka gobolka. Waxay saxafiyiinta Afrika taageereen warbixinadii ay soo saareen Human Rights wach iyo ururo kale oo xuquuqda aadanaha u dooda ee muujinayay in Mareykan iyo Golaha Amniga labadaba ay iska indh tireen xasuuqa ciidamada Itobiya ey ka wadaan Ogadenya.
Idaacadda oo wareysatay Thomas Mountain oo ah aqoonyahan arimaha caalamka ahna wariyaha kaliya ee wax ka qora arimaha Geeska Afrika ayaa yidhi; Itobiya waa askari Mareykan oo heegan ah oo lagu fuliyo hawlaha wasakhda ah. Waxay isku raaceen Thomas Mountain, iyo saxafiga Afrika isla markaana baadha arimaha xuquuqul insaanka Mr Keith Harmon, in Mareykanka iyo QM (UNO) ay ka indha dadbaan xasuuqa ay Itobiya ku hayso shacabka Ogadenya. Waxay sheegeen inay Itobiya ka joojisay raashinkii iyo dawadii malaayiin qof oo hadda qarka u saran macaluul iyadoo ay abaaraha ka jira Geeska Afrika uu sii xumaanayo taasoo ay sabab uga dhigtay inay ku daciifiso Jahadda ONLF ee dagaalka gobanimadoon kula jira ciddanka Itobiya.
Wuxuu sheegay Thomas Mountain inay abaar ba’an ka jirto Ogadenya oo malaayiin qof ee gaajo u liitaan. Wuxuu kaloo yidhi, 10 sano ayuu dagaal gobanimadoo ka socdaa halkaa ay shacabka kaga soo horjeedaan gacan bidixaynta iyo dagaalada foosha xun ee maamulka Meles Zianwi ee xukuma Itobiya uu ka wado dalkaa. Wuxuu maamulka Meles cunaqabatayn ku soo rogay dalka Ogadenya isagoo ka soo saaray samafaladii sida Red Cross iyo Doctors Without Borders si buu yidhi Mr. Thomas ay shacabka Ogadenya gaajo ugu dhintaan.
Waliba Itobiya waa dalka la siiyo mucaawanada ugu badan Afrika oo gaadha sanadkii 7Bilyan oo Doolar. Sidaa darteed sow dhab ma’aha in reer Galbeedka ay maalgalinayaan xasuuqa ka socda Ogadenya iyadoo ay saxaafadda reer galbedka ka aamusaneen inkastoo ay dhab ahaan u ogyihiin waxa ka socda halkaa.
Waxay idaacadda KPFA sheegtay in Go’aanka Goalaha Amniga ee Ciidmada Itobiya loogu dirayo Sudaan loo cuskaday mabda’a sheegaya in caalamka ay masuuliyad ka saarantahay inay badbaadiyaan shacabka hadii Qaranka ay ka tirsan yihiin uu badbaadin kari waayo. Qodobkan oo raqamkiisu yahay 1674 wuxuu Golaha Amniga soo saaray 2006 iyo 2009 si shucuubta loo badbaadiyo xiliyada dagaalka. Hasa ahaatee labadaa qodob midna in aan loo cuskanin si loo badbaadiyo shacabka Ogadenya ayaa barnaamijka idaacadda KPFA lagu soo gunaanaday.
abdul hak says:
maraykanku iyo dhamaan dowladaha ree galbeedku waxay si toos ah uga soo horjeedaan umada ree ogaadeenya sababtoo ah itoobiya awood uma laha inay umada ree ogaadeenya hal habeen la dagaalamaan.waxay umada ree ogaadeenya xaq u leedahay inay ogaato cida laynaysa, cuna qabateynta ku haysa,ku maal gelinaysa sidii loo baabi in lahaa, maleeshiyaadka maliz daily bread kooda waxaa bixiya ree galbeedka.